Samsung ga-eweta Galaxy Note 9 na Gear S4 ọnụ na mbido Ọgọstụ | Akụkọ akụrụngwa
Samsung ga ekpughe Galaxy Note 9 na Gear S4 ọnụ na mbido Ọgọstụ
Koreanlọ ọrụ Korea na-aga n'ihu ịmalite mgbasa nke ngwaọrụ ndị nnọchi anya ya. Anyị ahụworị ya na Galaxy S9, ihe ngosi nke dị otu ọnwa gara aga ma e jiri ya tụnyere ngosipụta nke afọ gara aga nke S8. Ugbu a ọ dị ka ọ bụ oge nke Galaxy Note 9. Dị ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke asịrị, Samsung na-ezube iwebata Nkọwa 9 na August 2 ma ọ bụ 9.
N'ime afọ ndị gara aga, ụlọ ọrụ ahụ na-egbu oge ịgba akwụkwọ ruo mgbe ngwụcha August, ụbọchị ole na ole tupu ngosi nke iPhone ịgbanwee. Mana ọ dị ka Nkọwa 9 agaghị abụ naanị ngwaọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na-eweta, ebe ọ bụ na Gear S4 nwekwara ike esonyere ya, smartwatch Samsung nke Tizen jisiri ike.
Samsung ewetawo ụdị Gear S niile na IFA ẹkenịmde kwa afọ na mmalite nke September na Berlin, ya mere, anyị ga-echere iji hụ ihe chaebol Korean na ihe omume a.
1 Kedu ihe dị na Samsung Galaxy Note 9
2 Gịnị bụ ihe ọhụrụ na Samsung Gear S4
Kedu ihe dị na Samsung Galaxy Note 9
Isi ihe ọhụụ anyị ga-ahụ n'ime Galaxy Note 9 bụ ogo batrị ahụ, nke na-esi na 3.300 mAh gaa 4.000 mAh, mmụba ezi uche dị na ya na-atụle na nha ngwaọrụ na ihuenyo karịrị nke S9 +, ihe atụ na-agbakwunye otu batrị dị ka Nkọwa 8.
Igwefoto nke ọgbọ ọhụrụ a ga-anọgide kwụ, ma n'oge a, ihe mkpịsị aka mkpịsị aka dị na ala nke igwefoto ma ọ bụghị n'akụkụ ya dị ka Nkọwa 8. Ihe ọhụụ ọzọ dị na ọnụ ọgụgụ nke agba nke ihe nlereanya a ga - adị (ọ bụ ezie na ọ bụghị n'ahịa niile): nwa, isi awọ, acha anụnụ anụnụ, odo odo na aja aja.
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na Samsung Gear S4
Fewbọchị ole na ole gara aga, asịrị banyere Samsung nwere ike iji SOS dị ka sistemụ arụmọrụ nke nke abụọ kachasị ere smartwatch n'ụwa, n'azụ Apple Watch. Gear S4 ga-anọgide na-achịkwa Tizen OS ma gụnye batrị buru ibu, ọkachasị 90 mAh karịa onye bu ya ụzọ, yabụ ọ bụrụ na ndụ batrị adịlarị mma, ugbu a ọ nwere ike ịdị mma.
Mana, ọ bụghị naanị ihe ọhụụ anyị ga-ahụ na Gear S4, ebe Samsung nwere ike tinye agba ohuru, ọla edo, si otú a mụbaa ọnụ ọgụgụ nke ndị ahịa. N'afọ ndị gara aga, Gear S dị na ọlaọcha na oji n'okpuru aha ndị Classic na Frontier.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Samsung ga ekpughe Galaxy Note 9 na Gear S4 ọnụ na mbido Ọgọstụ
OxygenOS 5.1.6 wepụrụ n'ihi mkpọka na OnePlus 6
O2 rutere Spain site na Telefónica nke Pedro Serrahima duziri